Igbo - 01. Conversation - Booklet 3: Otu esi akọwa Na Bible Enweghi Ebibi | Grace and Truth
Home -- Igbo -- 01. Conversation -- 3 Bible not Corrupted
Ọtụtụ ndị Alakụba nwere obi abụọ ma kwuo na e gbanwewo Bible ma mee ka ọ gbanwee. Ụfọdụ kwenyesiri ike na Ndị Kraịst haziri nke ọma na ndị na-arụsi ọrụ ike, nakwa na iwu ha dị mma. Ma ha na-elekwa ndị nọ n'etiti ha anya, ndị na-atụ egwu Chineke, dị ka ndị nrọ n'ọgbaigwe, n'ihi na Ndị Kraịst dị otú ahụ na-ewere Torah, Abụ Ọma na goslims bụ akwụkwọ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu na n'oge gara aga, ndị Alakụba a na-ekwu, mana mbipụta ha dị ugbu a na-agbakọ aka. Ndị Kraịst niile bụ maka ajọ omume dị njọ nye ha, ikwere na akụkọ ifo.
Ebee ka obi abụọ nke ndị Alakụba na-emegide akwụkwọ 66 nke Akwụkwọ Nsọ si bịa? Olee arụmụka ha na-ekwu iji gosipụta ebubo ha banyere nrụrụ aka nke Akwụkwọ Nsọ?
Azịza nke ajụjụ ndị a nwere ike ịchọta n'amaokwu iri nke kor'an. Ha bu ihe ndabere maka uzo nke ndi Alakụba megide Bible. E boro okenye nke ndị Juu nọ na Medina ebubo na ya akwaa iko. Ndị Juu achọghị ịkọwara ndị Alakụba amaokwu amaokwu banyere ịta ahụhụ maka ịkwa iko na Torah iji zọpụta okenye ha site na nkume. Ya mere, n'ọtụtụ akụkụ nke kor'an ya, Muhammed mere ka Chineke mara ndị Juu ndị a aka, bụ ndị na-emeghị ka ihe nzuzo na iwu nke Akwụkwọ Nsọ ha nye ndị Alakụba:
Akwụlala amaokwu m na ọnụ ala. (Sura al-Baqarah 2:41)
Ejila ikpe na-ezighị ezi kpuchie onwe gị ma zoo ihe ziri ezi, ebe ị maara ya. (Sura al-Baqara 2:42)
Ufodu n'ime ha nuru okwu nke Allah, ma ha kwuputara ya mgbe ha ghotara ya, n'ama (ihe ha na-eme). (Sura al-Baqara 2:75)
Ahụhụ ga-adịrị ndị ji aka ha dee akwụkwọ ahụ ma kwuo, sị: 'Nke a sitere na Allah!' na-ere ya na ọnụ ala. (Sura al-Baqara 2:79)
N'ezie, ụfọdụ n'ime ha na-ezochi eziokwu ahụ, ọ bụ ezie na ha maara ya. (Sura al-Baqarah 2:146)
Oh ndị nke akwụkwọ ahụ! Gini mere i ji eyikwasi ikpe ziri ezi na ime ihe ziri ezi ma zoo ikpe ziri ezi, ima (ihe i na-eme)? (Sura Al 'Imran 3:71)
N'ezie, ụfọdụ n'ime ha na-agbagọ asụsụ ha mgbe ha na-agụrụ akwụkwọ (ịgụpụta ụda), ka ị wee were (ihe a gụrụ) si n'akwụkwọ ahụ, ma ọ bụghị n'akwụkwọ ahụ. (Sura Al 'Imran 3:78)
Ụfọdụ ndị Juu na-akpali akwụkwọ ozi sitere na ebe ha (ka ha nwee echiche dị iche). (Sura al-Nisa 4:46)
Ebe ọ bụ na ha mebiri ọgbụgba ndụ ha, anyị (Allah) akatọ ha ma mee ka obi ha sie ike, nke mere na ha weghaara akwụkwọ ozi ndị ahụ n'ebe ha nọ ma chefuo akụkụ nke ihe ha mere ka ha buru n'isi. (Sura al-Ma'ida 5:13)
N'ime ndị na-asị, "Anyị bụ Ndị Kraịst (Nasara)", anyị edebewo ọgbụgba ndụ ha. Ma mgbe ahụ, ha chefuru akụkụ nke ihe a gwara ha ka ha buru n'isi. (Sura al-Ma'ida 5,14)
If you analyse these 10 parts of Qur'anic verses in the Arabic language you can find eight historical realities: Ọ bụrụ na ị nyochaa akụkụ 10 nke amaokwu Qur'an na asụsụ Arabic ị ga-achọta ihe asatọ mere eme:
Ndi obula "ndi obula", ma obu nani ndi nadigh nime ha, gbaliri iduhie Muhammad (Sura al-Baqara 2:75,146; Al'mran 3:78).
Ha bụ ndị a na-eduzi n'ụzọ ziri ezi (Sura al-Nisa 4:46), ma ha kpuchiri akụkụ nke iwu ha na okwu efu iji zoo ikpe ziri ezi (Sura al-Baqara 2:42, Al'ran 3:71).
Ha abughigharia ihe odide nke akwukwo nso nye Muhammad ma ha agwagh ya ihe nile site na akwukwo ha, ma oburu na o buru ndi ahia ya (Sura al-Baqara 2:41, 79).
Ha zoro ya iwu ụfọdụ, karịsịa ndị ga-emerụ ha ahụ na ọnọdụ ụfọdụ metụtara Muhammad na ndị Alakụba ya (Sura al-Baqara 2:42,146, Al'ran 3:71).
Ha gbanwere ụdaume ma ọ bụ mkpụrụ okwu ederede n'okwu ụfọdụ wee gbanwee okwu nke okwu ndị a (Sura al-Baqara 2:75, al-Nisa 4:46; al-Ma'ida 5,13).
Ha Ha gbaghariri ire ha mgbe ha na-ekwu ihe odide nke Torah ka onye ọ bụla ghara ịghọta ihe ha na-ekwu (Sura Al 'Imran 3:78).
Ha ji aka nke aka ha dee akwụkwọ nsọ ha ma cheta na o sitere na Chineke bịa (Sura al-Baqara 2:79).
Ha chefuru amaokwu nke amaokwu Akwụkwọ Nsọ ha, na, dị ka mkpughe, ha kwesịrị icheta ha (Sura al-Ma'ida 5:13). Muhammad boro ndi Kristian ebubo na ekwegh ekwe na Chineke na nkpughe ya (Sura al-Ma'ida 5:13).
Site na ebubo ndị a dị na kor'an ị ga-ahụ na ọ bụ nanị obere ndị Juu nọ na Medina nwere nsogbu na Muhammad. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị Juu adịghị ebubo na kor'an na nkọcha a. Ha agh ogh o ma obu dee ihe odide ha di ns o. Ndị Juu nọ n'ebe niile nwere ezigbo akwụkwọ Torah ruo taa.
Na kor'an, e nweghịkwa aha ọ bụla e kwuru na otu akwụkwọ mpịakọta nke Torah gbanwere site ná mmalite ruo n'ọgwụgwụ. Muhammad kwuru na ọ bụ nanị okwu ole na ole ka e kpuchiri, nke a na-ekwu n'ụzọ na-ezighị ezi ma ọ bụ na-eji ụda ụda dị iche iche eme ihe. Ekwesighi iguzosi ike n'ezi ihe nke Torah n'ozuzu ya na kor'an!
Ndi Ju, ma ndi Kristian, enweghi ike icheta amaokwu ederede site na Baibul, kama ha nyere echiche nke aka ha, ma obu ihe ha kwuru ma obu nkowa okwu nke Akwukwo nso. Maka ndi Alakụba na-amụta okwu ahụ ekpughere n’obi bụ ngosipụta nke ịhụnanya nke onye kwere ekwe n’ebe Chineke nọ na mkpughe ya. dị ịhụnanya dị otú a tụfuru ndị Juu na Ndị Kraịst. Muhammad chọrọ ịnụ ihe ederede nke Mkpughe ugboro ugboro site na ebe nchekwa, ọ chọghị ịma echiche nke ndị mmadụ banyere ya.
Ntụle a dị mkpirikpi nke amaokwu kor'an ndị a kpọtụrụ aha na-egosi na ndị Alakụba na-enyo enyo n'enweghị ihe mere na Toran na-emerụ kpamkpam. Tụkwasị na nke ahụ, kor'an ekwughị ebe ọ bụla na e merụrụ Oziọma ahụ ma ọ bụ gbanwee, n'ihi na Muhammad kwanyere Ndị Kraịst ùgwù ma mara na ha nwere ntụkwasị obi na ịhụnanya nke eziokwu ahụ.
Mgbe ọtụtụ ndị Juu na ndị Arab nabatara Islam kwenyere n'echiche ahụ n'etiti ha na Muhammad, onye kpọrọ onwe ya akara nke ndị amụma niile, ga-ebu amụma na okwu nke Akwụkwọ Nsọ. Muhammad kwere ka Isa kwuo na kor'an na onye ozi nke choro Ahmad gabia n'azu ya (Sura al-Saff 61:6).
Kemgbe ahụ, ndị Alakụba na-eche na ndị Juu na ndị Kraịst ehichapụla aha Muhammad ma ọ bụ synonym Ahmad nke sitere na akwụkwọ nsọ ha.
Na oge oge a na-enyocha amụma ndị dị n'ime Akwụkwọ Nsọ, wee hụ ma ha nwere ike ịkọwa ọbịbịa nke Muhammad. Ọtụtụ nkọwa na edemede na-ekwu banyere nkwenkwe nke Islam na ọ ghaghị ịbụ na a kpọrọ Muhammad na Bible. Ha na-aguputa Deuterọnọmi 18:15, 18. N'ebe ahu ka Moses siri, Jehova, bú Chineke-ayi, gēme ka onye-amuma biliere unu n'etiti umu-nne-unu. Gee ya ntị! Ndị Alakụba ji obi ụtọ kwuo, sị: "Onye amụma a kwere nkwa aghaghị ịbụ Muhammad." Ma ha achọpụtaghị na onye amụma a ga-esite n'aka ndị Izrel. Onye obula choro ha ma ha choro ikwuputa na Muhammad kwesiri ibu onye Israel ma obu onye Ju nke gewe iwe "Ee e!"
Site na Oziọma ha na-ekwu okwu ugboro ugboro banyere nkwa a ma ama nke Jisọs mere: Onye Ndụmọdụ, Mmụọ Nsọ, onye Nna ga ezite n'aha m, ga-akụziri gị ihe nile (Jọn 14:16, 17,26). Ndị nchọpụta Muslim na-eche na onye ndụmọdụ ahụ e kwere ná nkwa ga-abụ Muhammad! Ha na-enyocha okwu Grik bụ parakletos (onye ndụmọdụ), jiri ngwa ngwa dochie ụdaume ya ma gbanwee parakletos n'ime perikletos, nke pụtara "onye e toro" (Muhammad). Mgbe ha na-ebo Ndị Kraịst ebubo na ha gbanwere aha Muhammad n'ime parakletos, anyị nwere ike igosi ha na ọ bụ ha gbanwere ụdaume! Ọzọkwa, mgbe ị na-ajụ ndị na-achọ nkwa ndị a ma hà kwenyere na "Kraist" zitere Muhammad dị ka ohu ya, ị ga-anụ mkpọtụ ajuju. (Na Jọn 17:7, e dere na Jizọs ezitere onye ndụmọdụ ahụ.) Ajụjụ a nwere ike imebi nrọ a nke Islam.
Mgbe ndị ọkà mmụta Islam na ndị na-akọwa banyere kor'an jiri Akwụkwọ Nsọ tụnyere kor'an ọtụtụ narị afọ mgbe ọnwụ Muhammad nwụsịrị, ha chọpụtara na ọ bụghị otu ahịrịokwu dabara kpọmkwem n'akwụkwọ abụọ ahụ n'ụdị na ọdịnaya. Mgbaghara na-arịwanye elu sitere na nghọta a bụ nke oge ochie, ma ọ bụ mkpebi aghụghọ na-agbanwe. Ha kpebisiri ike na ọdịiche dị n'etiti Bible na kor'an aghaghị igosi nrụrụ aka nke Akwụkwọ Nsọ. Site na usoro a, e mere kor'an ka ọkọlọtọ na onyeikpe nke Akwụkwọ Nsọ. Ndi Alakụba kwenyere na akwukwo abuo sitere na akwukwo ogugu nke di n'elu igwe ma buru ndi mmadu site na mkpuru okwu. Otú ọ dị, ọdịiche dị n'etiti akwụkwọ atọ ahụ na-egosi na ha bụ aghụghọ nke Torah na Oziọma ahụ. Anyi kwesiri imata na n'agbata nkwubi okwu a, Islam gosiputara na ya bu mmuo nke imegide akwukwo nke neme ka otutu ndi Alakpo dina n'agha.
Agha nke anọ nke Islam megide Bible sitere n'aka otu onye na Mr Deedat, bụ Indian Indian na South Africa. Ọ chịkọtara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke arụmụka ndị na-abụghị nke Koran si n'aka ndị na-ekweghị na Chineke, ndị ọkà mmụta sayensị, ndị na-ahụ maka ihe onwunwe na ndị ọkà mmụta okpukpe na-emesapụ aka, bụ ndị yiri ka hà na-egosi njehie nke Akwụkwọ Nsọ. Akwụkwọ ya na-emegide Akwụkwọ Nsọ na-emegide ugboro ugboro okwu ndị dị na kor'an. N'agbanyeghi na arụmụka ya na-ewuli elu na isi iyi ya, ndi ochichi di iche iche nke Isslamic na-akwado ya ego, n'ihi na o nwere
N'ime ebubo ndị ọzọ, Deedat na-ekwu na Kraịst ekwughị eziokwu mgbe ọ buru amụma: Dịka Jona nọ ụbọchị atọ na ehihie na abalị n'ime azụ, otú ahụ ka Nwa nke mmadụ ga-anọ ụbọchị atọ na abalị atọ n'ili ya (Matiu 12 : 40; Mark 8:11-12; Luke 11:29-32). N'ụzọ dị mwute, Mr Deedat na-ekwu na Kraịst nọ n'ili ya site n'ehihie Friday, tupu anyanwụ adaa, ruo n'ụtụtụ Sunday, tupu ụtụtụ. Ọ na-ekwupụta n'eziokwu na Jizọs bụ nanị otu ụbọchị na ọkara na abalị abụọ n'ili ya, mana ọ gaghi enwe ụbọchị atọ zuru ezu na abalị atọ zuru oke! Site n'eziokwu a, ọ na-adọta nkwubi okwu ahụ na Jizọs abụghị onye amụma a pụrụ ịdabere na ya!
Ọtụtụ Ndị Kraịst amaghị otú ha ga esi aza ajụjụ ndị dị otú a banyere Mr Deedat wee pụọ na isi ndị isi. Ma na nke a, anyị nwere ike ịza na, dịka omenala ndị Juu si dị, ihe ọ bụla mere n'oge ọ bụla n'ụbọchị ka emere ụbọchị dum. Ebe ọ bụ na e liri Jizọs na Friday, Friday dum bụ ụbọchị ọ nwụrụ. N'otu aka ahụ, a kpọlitere ya n'ọnwụ n'ememe ụbọchị mbụ nke izu.
Site na ụdị aghụghọ Mr Deedat na-anwa ịjụ obe na mbilite n'ọnwụ Kraịst na ozioma ya. Ọ chịkọtara ọtụtụ okwu dị egwu banyere ederede nke Akwụkwọ Nsọ, nke ndị ọkà mmụta okpukpe na-emesapụ aka dere, na-anwa iji gosipụta site n'enyemaka nke okwu dị otú a na ọbụna ndị ọkachamara nke Kraịst ekwenyeghị na Akwụkwọ Nsọ enweghịzi ike. A na-ebipụta magburu onwe ya nke onye iro nke Kraịst ma kesaa ọtụtụ nde mmadụ na Afrịka, Eshia na mpaghara ndị ọzọ. Nd i akw ukw o ya na-ar u or u ot ut u om uma di iche iche n 'ot ut u as us u na-enwe mmet uta di egwu.
O ghaghi iju anyi anya na obughi ndi nke Kraist, kamakwa ndi Alakụba n’agha na ndagide obi ha na Bible. Onye ọ bụla nke na-anwa ịkọwa nzọpụta nke Kraịst nye ụmụazụ Muhammad ga-ebu ụzọ chọta ụzọ iji gosipụta ntụkwasị obi na Akwụkwọ Nsọ na ha, ma ọ bụghị mbọ niile enwere ike ịbụ n'efu. Ukwe na-esote nke Nikolaus Ludwig, Earl nke Zinzendorf (1700-1760), bụ eziokwu n'ọrụ ndị ozi ala ọzọ n'etiti ndị Alakụba:
Onye-nwe-ayi, chebe okwu-Gi,
onyinye oma, ọla edo a diri m;
n'ihi na ahurum ya n'ihe ọ bula
ọzọ kwa rue akukọ riri nne.
Ọ bụrụ na okwu gị adabaghị.
Gini bu nkpa-obi nke okwukwe?
Achọghị m ịrụ ọrụ maka otu puku ụwa
mana maka okwu a!
(Ukwe German Protestant nke German, EKG 436)
M f ị na-agbalị ịkọwara ndị Alakụba eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ, ị ga-ahụ isi okwu ise na-ekwu okwu na arụmụka maka nkwenye gị:
Ngbaàmà nke agba ochie na eziokwu nke okwu Chineke nke megharịrị;
Okwu nke Jisos Kraist banyere eziokwu nke Old na Agba ohu;
Ebumnuche dị iche iche nke ụwa nwere ike ikwenye eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ;
Amaokwu ndị dị na kor'an banyere iwu Torah na Oziọma mbụ ahụ;
Ahụmahụ anyị nke ịbịaru ike site n'okwu Chineke.
Onye ọ bụla chọrọ ịkọwara onye Alakụba na Chineke na-eche okwu ya ncheta kwesịrị icheta amaokwu ndị a ma kesaa ha na enyi Muslim ya:
● Jeremaịa 1:11-12: Okwu Jehova ruru m ntị: "Gini ka ị na-ahụ, Jeremaya?" - "M na-ahụ alaka osisi almond," ka m zaghachiri. Onyenwe anyi gwara m, "I huwo nke oma, n'ihi na ana m eche ihu ka okwu m mezuo."
E nyere onye amụma nkwa, emesiri ya obi ike na eziokwu nke okwu Chineke, n'ihi na Jehova n'onwe ya na-eche okwu ya. Onye naadigh ebighiebi adighi ehi ụra maob ghi náenweghi ihe obla, ma naachi ndi ya ma gbochie imebi okwu Ya. Ebumnuche nke okwu Chineke abughi nani okwu ahu n'onwe ya, kamakwa ihe o mere na mmetuta ya. Jehova na-echebe okwu Ya iji hụ na ọ dị. O nweghi onye puru ichota Onyenwe anyi kachasi ike ime ihe O kwuru.
● Na Deuterọnọmi 4:2, anyị na-agụ otu okwu site na Moses: Adịkwasịla ihe n'ihe m na-enye gị n'iwu ka ị gharakwa iwepu ya, kama debe iwu Jehova bụ Chineke gị nke m ga-enye gị.
Ònye ga-anwa anwa, ma ọ bụ site na njehie, gbanwee ụkpụrụ na nkwa Chineke, tinye echiche nke aka ya ma ọ bụ wepụ ihe ndị ọ na-adịghị amasị? Onye nweayi n'onwe ya nyere iwu site n'aka Mosis iji chebe okwu Ya kpamkpam na nke a na-agbanwe agbanwe, iji mụta ya site n'obi na ime ihe kwekọrọ na ndụ kwa ụbọchị. Bible na-agbachitere eziokwu ya n'onwe ya. Na Islam, okwu nke onye amụma bụ okwu kpọmkwem nke Allah! Enweghị ọdịiche dị n'etiti abụọ ahụ. Onye ozi nke Allah nwere ikike dị ukwuu. Ndị Alakụba na-aghọtakarị Torah ịbụ Agba Ochie dum.
● N'Ilu 30:5-6, anyi na-aguta: Okwu nile nke Chineke bu ihe efu; Ọ bụụrụ ndị na-agbaba n'ime ya ọta. Ejila okwu ya tinye, ma obu na o ga-abara gi mba ma gosi gi onye ugha.
Dika edochaworo oku site na oku, okwu nke Onye nwe ayi abiawo ike nke idi nso Ya. Ya mere, ọ bụ enweghị ntụpọ, dị ọcha na ebighi ebi. Onyenwe anyi nyere anyi "ihe agha niile nke Chineke" (Ndi Efesos 6:10-20) site n'okwu Ya. Onye n'emeghi ka agbanye obi n'okwu nke Onyenwe anyi enwegh ike ime mmuo. Onye na - enye nkà ihe ọmụma ya, nkà mmụta uche ya, nkà mmụta sayensị ma ọ bụ eziokwu ndị sitere n'okpukpe na ọdịbendị ndị ọzọ dị ka mkpughe, a ga - akọwa dị ka onye ụgha na ahụhụ Chineke. "Nzuzu nke okwu Jehova" kariri amamihe nke uwa (1 Ndi Kọrint 1:18-29).
● Abụ Ọma 33:4 Okwu Jehova ziri ezi ma bụrụ eziokwu; ọ na-ekwesị ntụkwasị obi n'ihe ọ bụla ọ na-eme.
Ihe odide nke Baibul nwere eziokwu zuru oke, obunagodi na ndi Muslim na ndi Kristain nwere onwe ha ghota eziokwu a. Ngosipụta nke eziokwu nke okwu Chineke dabeere na ihe Chineke na-eme. Okwu ya abụghị naanị eziokwu, ma ọ ga-eme ihe Ọ na-ekwu. Nkwa 333 na Agba Ochie mezuru n'Agba Ọhụụ, gosi eziokwu nke Agba Ochie n'ụzọ pụrụ iche. Na ụwa dum, ọ dịghị akwụkwọ ọ bụla nwere njide onwe onye nke eziokwu ya, dịka Akwụkwọ Nsọ. Onyenwe anyi na eme ihe O kwuru! K'an'an na-akụzi ihe niile. Ngosipụta a na-apụghị izere ezere nke nkwa ndị dị n'Agba Ochie na New Testa¬ ment bụ ihe na-emeghe anya maka ọtụtụ ndị Alakụba, nke kwekọrọ na nghọta ha banyere njirimara.
● Abụ Ọma 119:89 Okwu gị, Onyenwe anyị, dịruo mgbe ebighị ebi; ọ na-eguzosi ike n'eluigwe (Aịsaịa 40:8; 1 Pita 1:25).
Enweghi oke okwu nke okwu a bu "ebighebi" na-ekwuputa ihe ga-esi na ya puta. Anyị niile na-ebi nkenke. Ma okwu nke Onyenwe anyị guzosiri ike ruo mgbe ebighi ebi ma bụrụ nke a na-apụghị ịgbagha agbagha, ọbụna karịa nnukwu nkume ahụ dị n'etiti etiti Rhine Waterfalls dị nso na Schaffhausen, Switzerland, nke na-agbagharị ya gburugburu ehihie na abalị. Site n'okwu nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi ruru n'oge anyị. Maka mpaghara niile na maka ụyọkọ ụyọkọ ụyọkọ ụyọkọ ụyọkọ ụyọkọ kpakpando, okwu a nke Onyenwe anyị bụ nkwa nke dịgidere. Ihe o nyere n'iwu, nkwa ya na ihe omuma nke ihe omumu nke ndi kwere ekwe kwadoro ikwenye ntukwasi obi ya. Ụfọdụ ndị Juu na ndị Alakụba chere na akwụkwọ mbụ nke Chineke na ihe niile ọhụụ ya dị n'eluigwe. Ọ dịghị onye nwere ike ịsụgharị ma ọ bụ gbanwee okwu mbụ a nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.
● Famaokwu 19:7-9, nwere ihe akaebe nke Devid, otú o si mata eziokwu nke okwu ahụ na-agbanweghi agbanwe nke Onyenwe anyị na ndụ ya:
Iwu nke Onyenwe anyi zuru oke,
eme ka nkpuru obi di ndu.Iwu nile nke Jehova bu ihe kwesiri ntukwasi-obi,
na-eme ka ndị maara ihe mara ihe.Iwu nke Onyenwe anyị ziri ezi,
na-enye obi ụtọ na obi.Iwu nke Onyenwe anyị na-egbuke egbuke,
enye ìhè n'ile anya.
Onye na-echebara okwu anọ ndị a echiche: zuru okè, ntụkwasị obi, nke ziri ezi ma dị mma ga-atụkwasị obi n'eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ ma nyefee ya na ndị Alakụba.
● Aisaia 55:10-11 na-agba ndị ohu niile nke Onyenwe anyị ume inye ndị Juu, ndị Hindu, ndị Buddha, ndị Alakụba, ndị isi na ndị na-anụ ọkụ n'obi: Dịka mmiri ozuzo na snow si esi n'eluigwe bịa, ma ghara ịlaghachite ya n'emeghị ka mmiri ahụ dị ọcha. uwa ma mee ya ka o maa nma, ka o wee mia nkpuru nye onye agha na nri maka onye na eri ya, otua ka okwu m nke si n'ahum puta: Ogagh alaghachikwute m n'efu, ma ogamezu ihe m choro ma mezuo ya. na-eche ihe m zigara ya.
Nkpughe nke Onyenwe anyị n'ime Akwụkwọ Nsọ abụghị nanị eziokwu na eziokwu, ma dị ike ma dị ike. Ha ga-eme ihe Onyenwe anyị chọrọ. Ndị Alakụba echeghị na okwu ahụ e kpughere egosipụtara nwere ike dị otú ahụ. Ihe sitere na okwu nke Bible na-emepụta ihe, ịgwọ ọrịa, ịgbaghara mmehie, nkasi obi na ume ọhụrụ. Ọtụtụ ndị Juu ghọtara eziokwu a ma kwanyere akwụkwọ mpịakọta iwu ha ùgwù. Ihe kariri mmadu ole na ole n'ime ha ji ugwo ha kwenye n'ihi nkwenye ha na ezi ihe na ikike nke akwukwo Agba Ochie.
● Matiu 5:17-18 na-enye nyocha nke nduzi na nke nduzi nke Jizọs Kraịst bụ onye na-akọwa ọnọdụ Ya gbasara mkpughe dị n'Agba Ochie: Echela na abiala m ka iwepu Iwu ahu ma obu ndi amuma; Abiaghm ibibi ha kama imezu ya. Ana m agwa gị eziokwu, ruo mgbe Eluigwe na ụwa ga-apụ, ọ bụghị akwụkwọ ozi kachasị nta, ọ bụghị obere akụrụngwa nke pen, ga-apụ n'ụzọ ọ bụla site n'Iwu ruo mgbe ihe niile ga-emezu.
Site n'okwu a gbara ọkpụrụkpụ, Ọkpara Chineke ghotara eziokwu nke Agba Ochie. Jisos goro na O ji ihe ndi ozo di nma ma obu ndi di nma karie ihe ndi ochie, dika nke kor'an, nke onwe ya nwere okwu iri abuo na iri na abughi ndi ozo.
Ot'odi, Jisos Kraist nekwu maka nmezu nke iwu na ndi amuma site na nkuzi ya, ndu ya, ihe omuma ya, onwu ya, nbilite n'onwu ya, nmiputa nke Mo Nso na nloghachi Ya. Onyenwe anyị Jizọs kwanyeere ya ùgwù ma mee ka ọ dị ndụ na mkpughe dị n'Agba Ochie dị ka Bible Ya.
Jizos mere ka ekwenye ekwenye na akwukwo nile nke Agba Ochie ruo mgbe njedebe nke eluigwe na uwa ka obuna Muslim we kwenye na obugh ihe nkedo ntà, ma obu ihe nadigh anya efu, ma aghagh imezu ya. Nkwupụta nkwupụta a sitere na Jizọs Kraịst kwusiri ebubo nke Muhammad na ndị na-eso ụzọ ya.
● Matiu 24:35 na-enye okwu ọzọ nke Jizọs Kraịst nke na-eme ka eziokwu na ebighi ebi nke ozioma ya na akụkụ Akwụkwọ Nsọ nile dị n'Agba Ọhụụ mezuo: Eluigwe na ụwa ga-agabiga, ma okwu m agaghị agabiga.
Jizọs abụghị onye nwere nchekwube ma ọ bụ onye na-enweghị atụ, kama ọ bụ onye dị adị n'ezie. Ọ na-emesi anyị obi ike na usoro niile nke mmadụ iji meziwanye ụwa na iji chekwaa ihe e kere eke ga-abụ n'efu, n'ihi na eluigwe na obere ala anyị ga-agabiga. Ma ebe obu na Onyenwe anyi di ndu, okwu ya juputara na mmuo na ike ya gosiputaghi ihe ozo obuna mgbe ihe mebiri ma laa n'iyi. Ọ na-agba anyị ume ikwere ma nwee olile anya mgbe Ọ sịrị: Na-aṅụrị ọṅụ na edere aha gị n'eluigwe! (Luk 10:20). Ndi niile am rozo site n'okwu Ya ma nata Mmo Nso Ya naabeta nd ebighiebi.
● Luk 1:1-4 na-egosi anyị otú nlezianya na kpọmkwem ndị na-ezisa ozi ọma si na-edozi okwu na omume nke Jizọs Kraịst. Onye Gris onye Gris na-akọwa otú o si kọọ oziọma ya: Ọtụtụ ndị emeela ka ha dee akụkọ banyere ihe ndị mezuworo n'etiti anyị, dị ka ndị ahụ si na mbụ buru ndị akaebe anya na ha ndị ohu nke okwu ahụ. Ya mere, ebe ọ bụ na mụ onwe m ejiri nlezianya nyochaa ihe niile site na mmalite, ọ dịkwa mma ka m deere gị akwụkwọ ndezi maka gị, Tiofilọs kachasị mma, ka ị wee mara na ihe ndị a kụziiri gị bụ eziokwu.
Oziọma ndị ahụ adaghị n'eluigwe dị ka akwụkwọ zuru ezu, dịka ụfọdụ ndị Alakụba na-eche na kor'an ka e gosipụtara. Dọkịta Luke, bụ onye Gris bụ onye Gris, bụ onye nọ na Kraịst, jụrụ ọtụtụ ndị akaebe anya na ndị ọrụ ha bụ ndị ndịozi họpụtara ka ha chịkọta ma dee okwu Jizọs. A kpọrọ ha ndị ohu nke okwu ahụ.
Luk, bụ dọkịta, chọrọ ịmata otú Virgin Mary ga-esi nwee nwa n'enweghị di! N'ihi ya, o ji nkwanye ùgwù jụọ ya banyere ihe ndị ahụ. Ma eleghị anya, Meri gwara ya otú mmụọ ozi Gebriel si bịakwute Zekaraịa ma mee ka a mụọ Jọn Baptist (Luk 1:5-24). Ọ gwara ya banyere ọhụụ nke onyeisi ndị mmụọ ozi ya na Nazaret (Luke 1:25-56) ma kọọrọ ya nkọwa banyere akụkọ Krismas (Luk 2:1-21). O gwakwara ya banyere ịkọwa ihe banyere Jizọs na ụlọ nsọ (Luk 2:22-40) na banyere nleta Jizọs dị afọ iri na abụọ n'ụlọ nsọ (Luk 2:41-52).
Dika onye Gris nke Grik natara otutu ilu na ihe banyere Jisos nke ndi ozi ozioma nekwugh: aturu efu (Luk 15:1-7), nwa mmefu (Luk 15:11-32), ezi onye Sameria (Luk 10 : 25-37), onye bara ọgaranya na Lazaretus (Luk 16:19-31) na akụkọ banyere iri iri (Luk 17:11-19). Luke ama okop uw ut ¯ nkp o Pharius ye mbeneus o ¯ n (Luke 18:9-14), enye ama ewet mme ¯ nkp o emi Jesus okodude ke Zacchaeus (Luke 19:1-10) ye mb o ¯ n Abasi ke Jerusalem ( Luk 19:41-44). Luk tinyekwara akụkọ banyere Meri na Mata (Luk 10:38-42), nye aha ndị inyom na-eso ụzọ na-eso Jizọs (Luk 8:1-3), ma eleghị anya na-amụta site n'aka ha okwu atọ pụrụ iche Jems kwuru n'elu obe (Luk 23:34,43,46).
Luk choro maka omuma banyere nzuko nke Jisos bilitere n'onwu na ndi neso uzo abua na Emus (Lk 24:13-35) na ihe omuma ndi ozo banyere Jizos bilitere n'onwu nke kuru ndi Jisos ndi choro site na akwukwo nso nke agba ochie (Luke 24:44-49). Ọ bụ naanị ya kọrọ banyere ịrịgo Jizọs (Luk 24:50-52; Ọrụ 1:1-14) na nchụpụ nke Mmụọ Nsọ (Ọrụ 2:1-47).
Na-enweghị Luk, dibịa, anyị agaghị ama ọtụtụ amaokwu ederede nke ozioma. O dere akwụkwọ abụọ ya maka otu onye, Theophilus, onye gọvanọ Rom onye ghọrọ onye Kraịst na Antiọk. Onyenwe anyị bilitere n’ọnwụ, site na Mụọ Nsọ ya, duuru Luk “onye mba ọzọ” ịchịkọta akụkọ ihe mere eme nke ọma wee were ọrụ dịịrị ya dee ha n'usoro. Ejiri mmụọ nsọ kwado ya, dere ya ma kaa ya akara. Jizos ke idemesie ikewetke n̄wed okposụkedi enye ekemede ndikot nnyụn̄ n̄wet Hebrew. Mana ndị ji anya ya hụ ama gbara ezigbo akaebe kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe ha hụrụ ma nụ.
● Jon 1:14 nyere anyị aka pụrụ iche mgbe anyị na-ekwusara ndị Alakụba: Okwu ahụ ghọrọ anụ ahụ ma bie n'etiti anyị. Ayi ahuwo otuto-Ya, bú otuto nke Ọkpara amuru nání Ya, Onye sitere na Nnam, Nke juputara n'amara na ezi-okwu.
Jon ghọtara na ọ bụghị naanị na Jizọs kwusara okwu nke Onyenwe anyị, mana Ya onwe ya bụ Okwu ahụ! Odigh ihe di iche n'etiti okwu ya na olu ya. N'ihi ya, Ọ nọgidere na-enweghị mmehie. Okwu nke Onyenwe anyị na-emepụta, na-agwọkwa, na-agbaghara, na-akasi obi ma na-emegharị ndị kwere ekwe. Na Jis] s uche Chineke na ike Ya dŽ anya. Inye nke okwu nke Onye nweayi nime Jisos achikota okwu nile nke Chineke nime madu Ya. Nkwa nile bu Ee na Amen nime Ya. Anyị ekwenyeghị na "okpukpe", kama na "onye"! Ọ bụghị nanị na anyị na-atụkwasị obi na okwu nke Onyenwe anyị, kama na mbụ n'ime Jizọs, mmadụ. Ọ dịghị agbanwe agbanwe. A pụrụ ịgha ụgha ma bibie akwụkwọ. Ma Jizọs na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ Okwu nke Onyenwe anyị. K'an'an na-agba akaebe na nke a ugboro ise. Anyi kwesiri ighota ndi ndi Alakụba, megharia ya ma kwusaa Jizos dika Okwu nke Chineke n'edu.
● John 16:13 nwere okwu na-adọrọ mmasị: Ma mgbe ọ, Mmụọ nke eziokwu, abịa, ọ ga-eduzi gị n'ime eziokwu niile.
Mgbe onye bụbu Muslim nọ na Kashmir gụrụ amaokwu a, ọ jụrụ obi ụtọ, "Ị nwere Mmụọ nke eziokwu?" Ọ nọgidere n'echiche ya, sị, "Ọ bụrụ na ị natara mmụọ nke eziokwu, ị gaghị agha ụgha. Ma oburu na i ghagha ugha ngwa ngwa, Mo nke eziokwu geme gi ka i kwuputa okwu ugha gi. Mmụọ a adịghị anabata enweghị obi eziokwu. "Nwoke ahụ si Kashmir echeghị ka azịza nye ajụjụ ya ma gaa n'ihu, sị," Ọ bụrụ na Mmụọ nke eziokwu bi na Ndị Kraịst, ha apụghị ịgha ụgha na Bible! Mmụọ a n'eziokwu agaghị ekwe ka nke a. "
Nke ahụ bụ isi nke nsogbu ahụ! Ndị Alakụba na-eche na ndị Juu na Ndị Kraịst na-agbagha Bible, n'ihi na mmụọ nke eziokwu adịghị na Islam. Na Islam, a na-akwado ụgha n'okwu anọ: na Agha Ọgụ, na ime ka ndị Alakụba abụọ dịghachi mma, mgbe di na-agwa ndị nwunye ya okwu, na mgbe nwunye na-agwa di ya okwu. Ọbụna iyi a na-ekwu na ngwa ngwa nwere ike ịgbaji (Sura al-Tahrim 66:1-2). Na Islam Allah na-akpọ ya onwe ya onye kachasị mma nke ndị aghụghọ niile (Sura Al 'Imran 3:54, al-Nisa 4:132, al-Anfal 8:30). Ònye ga-eju ya anya mgbe ọ hụrụ ka ndị Alakụba na-eche na ndị ọzọ na-aghọ aghụghọ dika mmụọ ha na kor'an? Ọ bụrụ na ị gbalịrị ịkọwara onye Alakụba eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ, ị ga-ebu ụzọ kpee ekpere, na Mmụọ nke eziokwu ga-ekpuchi ha nakwa dịka onwe gị. Eziokwu oz o, ikwes i nt ukwas i obi na nt ukwas i obi ga-ab u okwu nd i oz o.
● Jọn 17:17 na-ekpughe ihe nzuzo na ekpere ikpe ekpere nke nnukwu oku nke Jizọs. N'ebe ahụ ka o kwuru nkọwa doro anya nke eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ n'ụzọ kachasị dị mfe: okwu gị bụ eziokwu! Nkebi okwu a karịrị ihe nkuzi, ozizi, ma ọ bụ ịgba akaebe. Kama nke ahụ, Jizọs na-akọwa eziokwu na eziokwu nke okwu Chineke n'ime mkparịta ụka ya na nna ya nọ n'eluigwe. Ihe obula ndi na-acho Baibul, ndi ozo ndi ozo, ndi Alakụba nke ndi Kristain ma obu ndi ozo nke ihe onwunwe na-ebute imegide Bible ga-agbaji tupu eziokwu a nke Chineke. Ihe ọ bụla ha nwere ike inye dị ka ihe akaebe, ịgha ụgha ma ọ bụ nkwenye ga-agbagha site na akaebe Ọkpara ahụ nye Nna Ya: Okwu gị bụ eziokwu!
N'asụsụ ndị Juu, eziokwu pụtakwara "iwu na ezi"! Ya mere, ahịrịokwu a pụtara: Okwu nke Onyenwe anyị na-echekwa iwu Ya nile, ụkpụrụ ya na ọbụna ụkpụrụ nke ikpe, nakwa amara nile, mkpuchi mmehie na àjà mgbapụta maka anyị. Onye bi n'èzí ma ọ bụ megide iwu Akwụkwọ Nsọ bụ onye nnupụisi. Ma onye na-edebe ma na-ekwere okwu Jizọs ga-abụ onye ezi omume ma dị ọhụrụ. Okwu ya bụ ndụ anyị, ike anyị na olileanya anyị. Onye obula ohu nke Onyenwe anyi nwere ihe omuma maka omuma ihe omuma ya, ihe omuma ma obu ihe omimi di iche: Eziokwu siri ike nke okwu Jehova; Kraist b eziokwu ma kwue okwu nke Nna Ya.
● Mkpughe 22:18-19 na-enye ịdọ aka ná ntị siri ike nke kwekọrọ n'uche Muslim: Ana m adọ onye ọ bụla nụrụ okwu amụma nke akwụkwọ a aka: Ọ bụrụ na onye ọ bụla agbakwụnye ihe ọ bụla nye ha, Chineke ga-atụkwasịrị ya ihe otiti ndị a kọwara n'akwụkwọ a. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ewepu okwu site n'akwụkwọ a nke amụma, Chineke ga-ewepụ òkè ya na osisi nke ndụ na n'obodo nsọ ahụ, nke a kọwara n'akwụkwọ
Ndị Alakụba nwere ike ịghọta ihe ịdọ aka ná ntị a pụtara: Ọ bụrụ na i tinye ihe ọbụla n'okwu Chineke, Chineke ga-atụkwasị ihe otiti dị ukwuu maka ntaramahụhụ gị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụrụ na i wepụ ma ọ bụ gbochie okwu ma ọ bụ nkọwa sitere na okwu nke okwu Chineke, Chineke ga-ebelata ma ọ bụ wepụ ngọzi ya kwadebeere gị n'eluigwe. Ihe nchoputa nke egwu Chineke bu ihe doro anya: Onye gabu onye nzuzu ka o ghagide okwu Chineke ma oburu na ebighebi ebigh ebi na ihe nadigh nma? Obu ihe ijuanya na ndi Ju ndi na-egwu egwu Chineke puru imehie Torah ma obu ezi Onye nke ozioma. Oburu na o kwenyeghi ma obu ndu ndu ndi naadighi asọpuru Chineke, ya abughi ezi onye Ju ma obu onye kwesiri ntukwasi obi, kama obu nwa nke nna nile ugha (Jon 8:37-45).
Na Old na n'Agba Ọhụụ ị ga-ahụ ọtụtụ amaokwu ndị na-egosi eziokwu na eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ. Anyị ekwesịghị ịgụ Akwụkwọ Nsọ naanị maka ndị Kraịst, kamakwa mụta ịghọta otú amaokwu ndị a nwere ike isi gwa ndị Alakụba okwu. Baibul na-agbachitere ma kwenye onwe ya. Anyị kwesịrị ịdị na-ege ntị n'olu ya, iji nwee ike ịkụziri ndị Alakụba eziokwu ahụ.
Ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ndị Alakụba taa kweere na sayensị. Ha na-ahapụ usoro echiche nke oge ndị Koran. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-ekwe omume isoro ha kwurịta okwu nke ọma ma gbaa ha ume ka ha chee echiche dị nro. Ihe a na-akpọ "Ajụjụ" nwere ike inyere gị aka ebe a. Ajụjụ mbụ bụ:
Ònye duhiere Bible? Ndị Juu ma ọ bụ Ndị Kraịst? Ọtụtụ n'ime ha zara: Ndị Juu! Anyị nwere ike ịzaghachi: Ì chere Ndị Kraịst ga-agbachi nkịtị ma ọ bụrụ na ndị Juu agbanwewo Torah na ndị amụma? Eziokwu ahụ bụ na obodo abụọ dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-eme ka ọ ghara ikwe omume ka onye ọ bụla n'ime ha mee ihe nzuzo ma ọ bụ n'ihu ọha site n'akwụkwọ ọ bụla sitere n'Agba Ochie. Ọ bụrụ na a boro Ndị Kraịst ebubo na ha gbanwere Torah, ị nwere ike ịza na ndị Juu na-ekpe okpukpe ochie ga-amalite ịwakpo agha zuru ụwa ọnụ megide ndị jụrụ okwukwe a. Ndị Juu na-asọpụrụ Chineke ga-adị njikere ịlụ ọgụ ọbụna megide ndị Juu nwere onwe ha iji chebe ọnọdụ nke okwu Onyenwe ha.
Ini ewe ke Torah ama ọfọn? Ọ bụrụ na ha azaa "tupu" Muhammad, ị nwere ike ịjụ ihe mere Muhammad ji kpọọ aha Mozis ugboro 136 na kor'an, Ebreham ugboro 69, Setan 68 ugboro (Shaitan), Israel 47 ugboro, Solomon 17 ugboro na David 16 ugboro. Al''an kwadoro akụkọ nke Torah na ndu ha site Allah. N'afọ iri abụọ na ise nke ọrụ okpukpe ya, Muhammad tụlere Torah ịbụ eziokwu nke eziokwu n'emeghị ajụjụ. Otú ọ dị, ọ pụghị ịgụ Hibru ma dabere na ndị na-asụgharị okwu nke ga-asụgharị ya ederede Arabic. Ha enyeghị ya ihe odide mbụ nke Akwụkwọ Nsọ kama ọ bụ akụkọ na iwu sitere na Mishna na Talmud.
Ọ bụrụ na Muslim kwenyesiri ike na e merụrụ Torah nanị n'oge afọ ole na ole gara aga nke Muhammad na Medina, ị ga-achọpụta na a sụgharịrị Bible ugbu a n'ọtụtụ asụsụ: Grik, Latin, Armenian, Syria, Kaldea otu, Coptic, Abyssinian na asụsụ ndị ọzọ. N'akwụkwọ ndị a, e nwere ọtụtụ narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku, nke ihe odide ndị nwere aka. Ònye ga-anakọta Bible ndị ahụ niile n'ime nsụgharị ndị ahụ iji gbanwee okwu ụfọdụ na ibe ụfọdụ? Dika Baibul buru ebe nile gbasaa n'oge Muhammad, obu ihe agagh adi ike imeghari ihe odide ahu!
Ihe ndị dị na Bible ka a ghọgburu? Ọ dịghị Muslim maara azịza na-eju afọ nye ajụjụ ahụ! Ọtụtụ n'ime ha amaghị ihe dị na Torah. Ya mere, anyị nwere ike igosi ha na anyị ka nwere otu Bible mbụ wee dịrị njikere iji nlezianya nyochaa ihe odide ọ bụla a chọtara na ndị Alakụba. Ruo oge ah u, ma obu na any i nwere ikike ikwusi ike na Bible any i bu eziokwu. Ọ bụghị anyị, onye ebubo, iji gosi eziokwu ya na nkwado ya, ee, ọ bụ maka onye na-ebo ebubo, ndị Alakụba gosipụtara nke ọzọ - nke ha na-apụghị ime. Ruo mgbe ha nwere ike iweta Baibul mbụ ka mma, anyị nwere ike inye ha otu akwụkwọ ederede kachasị edozi.
Maazị Deedat na-agba mbọ imebi Bible site n'enyemaka nke arụmụka mbibi nke ndị na-ekweghị na Chineke na-ekweghị na Chineke si malite na narị afọ nke 19. Ma ọtụtụ ihe arụmụka ya bụ ndị ọkà mmụta sayensị dere. Ka o sina dị, ọ dị mkpa maka ndị ozi ala ọzọ n'etiti ndị Alakụba ịgụ akwụkwọ Deedat na azịza nke onye Kraịst ibe ya, Mr Gilchrist, ọkàiwu na South Africa, iji nwee ike inye azịza kwesịrị ekwesị na enyemaka.
Ụfọdụ ndị Alakụba a na-amụrụ ihe na-ezo aka na ọkwa dị iche iche na Grik Agba Ọhụrụ, nke gosipụtara ọdịiche dị n'etiti ihe odide mbụ. Ha na-eji nlezianya na-eji esemokwu ndị a mee ihe iji mesie ebubo ha ebubo. Ma kpọmkwem ihe odide ndị ahụ dị na ya gosipụtara eziokwu, ikwesị ntụkwasị obi na ọdịdị nke ọgbọ nke ndị nchọpụta, ndị ọkà mmụta okpukpe na ndị na-adịghị achọpụta ụdị edemede mbụ, ma, n'ihi eziokwu ahụ, nọgidere na-echekwa ihe ndị ahụ dị iche iche, mmekọrịta. Ọ dịghị akwụkwọ ọzọ dị n'ụwa nke a kwadoro dị ka Agba Ọhụụ na ihe karịrị narị afọ ise na iri ise.
Site na kor'an ọnọdụ ahụ bụ ihe dị iche! Mgbe Muhammad nwụrụ, e nwere ihe dị iche iche nke ihe odide mbụ nke kor'an nke gosipụtara ụdị nsogbu dị iche iche, nke mere na esemokwu na esemokwu malitere na echiche nke caliphs. Caliph Uthman nyere Zaid b iwu. Thabit iji dezie otu ọkọlọtọ ọkọlọtọ na iji nweta ihe nile dị adị na-ere ọkụ! Ndi Alakụba nke oge a abughi ugha nke kor'an, nani akwukwo nke edere Koran nke Uthman. Umu Shiite kwuru ugboro ugboro - ụfọdụ n'ime ha na-eme nke a ruo taa - na agbaghawo kor'an nke Uthman ma merụọ ya.
Akwụkwọ mpịakọta Aịsaịa nke Qumran
Akwụkwọ mpịakọta Qumran, nke Bedouins chọtara na nso Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, dị mkpa iji gosipụta ọdịdị nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Otu n'ime ha bụ akwụkwọ mpịakọta a na-eche nche nke Aịsaịa. Ndị ọkà mmụta sayensị nyochara akwụkwọ mpịakọta a ma chọpụta na ọ nwere ike ịmalite site n'afọ 150 ruo 100 tupu Kraist. Ruo mgbe a chọtara akwụkwọ mpịakọta ndị a, ihe odide kachasị mkpa nke Torah bụ site n'afọ 875 AD.
Mgbe nchọpụta nke akwụkwọ mpịakọta Aịsaịa dị na Qumran, ọ nwere ike ime ngwa ngwa iji nwalee ma mmejọ mehiere site na ohere n'oge 1000 afọ na-edegharị, ma ọ bụ na a nwara aghụghọ. Oge nke ajụjụ a gụnyere ndụ nke Muhammad na usoro ọmụmụ nke Islam, ka e wee nwee ike ịza ebubo ebubo nke aruma ha.
Onye odeakwụkwọ ahụ mehiere ọtụtụ ugboro mgbe ọ na-ede akwụkwọ mpịakọta Aịsaịa. A na-edehie nke ọ bụla na mpịakọta ahụ site na mkpịsị ụkwụ atọ n'okpuru akwụkwọ ozi ahụ. Edere akwụkwọ ozi ziri ezi n'elu ya. E nweghị ehichapụ ederede. Ihe niile nwere ike ịhụ anya. Na njedebe nke mgbazi niile akwụkwọ ozi nke akwụkwọ mpịakọta niile na mbụ na na kaadị a gụrụ dị ka ọ dị mkpa ruo mgbe a ga-eme ka ihe ọ bụla dị iche iche dị ọcha! Akwụkwọ mpịakọta Aịsaịa site n'olulu ndị dị na Qumran nwere ike ime ka onye ọ bụla Muslim nke hụrụ eziokwu ahụ n'anya.
Ná mkparịta ụka niile banyere eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ, ọ dị mkpa ka anyị ghara ichezọ na kor'an enweghị ebe ọ bụla na-ekwu na e mehiere Oziọma ahụ. Muhammad kwanyere ndị Kraịst ùgwù ma mara na ha aghaghị ụgha ma ọ bụ na-egwu ya. Mana, a ghaghi itinye okwu a n'amara, ike dika ajua, ka ndi ihere ghara ime ihere.
Ná mmalite, Muhammad gosipụtara nkwanye ùgwù dị ukwuu nye ndị Juu na ndị Kraịst n'ihi na ha nwere akwụkwọ nsọ. Ọ nakweere akaebe ha, nke a sụgharịrị n'asụsụ Arabic, ma tinye ya na kor'an ya. Onye guzobere Alakụba enweghị ohere ịgụ Torah na Oziọma n'asụsụ ala ya, n'ihi na edebeghị akwụkwọ ndị a n'asụsụ Arabic. Naanị mgbe Muhammad guzobere ala okpukpe ya na Medina ma na-atụ anya ka a mara ya, nkwekọrịta na nrubeisi nke ndị Juu na Ndị Kraịst, ọ malitere ịwakpo ha, n'ihi na ha chọrọ ịnọpụ iche. Ebe ọ bụ na ha amataghị na ya bụ onye amụma, ọ lụrụ ha ọgụ, chụpụ ha ma gbuo ndị Juu. A na-emeso Ndị Kraịst nke ọma na mmalite n'ihi na ndị Abyssinia nyere ndị Alakụba ebe mgbaba n'oge mkpagbu ha.
Site n'oge mgbe Muhammad gbalịrị imeri ndị Juu na Ndị Kraịst maka Islam, e nwere ọtụtụ amaokwu dị mma na kor'an, nke a pụrụ iji gosipụta ndị Alakụba na Muhammad n'onwe ya kwadoro enweghị ike nke Akwụkwọ Nsọ.
● Anyị na-ahụ ọtụtụ n'ime amaokwu ndị a na Sura al-Ma'ida. Ndị Juu nke Midina nwara Muhammad, onye isi obodo na onye ikpe nke obodo ahụ, ikpe ikpe ikpe rụrụ arụ n'obodo ha. Ma, Muhammad, onye na-enweghị ike ịgụ Torah n'onwe ya, mara ọnyà nke nwere ike ime ya ka ọ bụrụ onye na-akwa emo ma ọ bụ onye na-amaghị ihe ma mee ka ọ hụ ọbọ nke obodo ahụ (Sura al-Ma'ida 5:42). Ya mere, o zitere ndị ndú ndị Juu ikpe ahụ, na-akpali mmasị ma dị mkpa (Sura al-Ma'ida 5:43-45):
43 Olee otu ha ga - esi jụọ gị ikpe ikpe ha ma ọ bụrụ na ha bụ Torah nke ikpe ikpe Allah? Na (ma ọ bụrụ na ị ga - ekpe ha ikpe) ha ga - agbakụta gị azụ mgbe e mesịrị. Ndị a abụghị ndị (ezigbo) ndị kwere ekwe.
44 Anyị mere ka Iwu ahụ gbadata (si n'eluigwe). N'ime ya enwere nduzi na ìhè. Ndị Amụma ndị debere (Allah) na-ekpe ya ikpe maka ndị Juu; na ndị Rabbis na ndị odeakwụkwọ (mee otu ihe ahụ) site na ihe ha nyere ha n'aka akwụkwọ Allah. Ha bụ ndị àmà ya. Unu atụla egwu ndị mmadụ ma tụọ egwu m! Adịla ire m (= amaokwu) maka obere ego. Onye obula nke n'ekpeghi ikpe site na ihe Chineke mere ka o si n'elu igwe ridata, ndi ahu bu ndi nadigh.
45 N'ime ya, anyị nyere ha iwu ka ha bụrụ mkpụrụ obi (aghaghị igbu) maka mkpụrụ obi, na anya (ebibi) maka anya, na imi maka imi, na nti maka ntị, na ezé maka ezé, na ọnyá ahụ (dịka). Ma onye obula nke nyere onyinye karia ya (ya bu, karia ugwo ugwo nmehie) mgbe ahu obu ihe ngbaghara ya. Onye ọ bụla nke na-ekpeghị ikpe site na ihe Allah mere ka ha debe (si n'eluigwe) ndị ahụ bụ ndị omempụ.
Amaokwu ndị a dị mkpa mere ndị Juu ekwesịghị ịmanye ịbụ ndị Alakụba na ala Alakụba! A na-ekwe ka ha kpee ikpe nke ha dịka iwu ha si dị. Otu ihe di mkpa kpatara iwu ndi a bu ihe akaebe nke Muhammad, onye kwuputara n'amaokwu nke ndi Koran na n'oge ya iwu nke agba ochie nime Torah zuru oke. O kwenyekwara na nduzi iwu na ìhè Chineke dị na Torah, nakwa ikpe nke gụnyere iwu na amamihe, nduzi na ebere. Amaokwu ndị a dị n'Akwụkwọ Nsọ pụtara na Allah na-eduzi ndị Juu n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụghị eduhie ha. Ha nwere ihe omuma ma huta ezi ntuli aka nke Allah, ebe ha nwere akwukwo nke sitere na Chineke. Gịnịzi mere ndị Alakụba ji ekwu na e merụrụ Torah?
● Ụdị nkwụsị nke nrubeisi nye Islam bụ ihe kwekọrọ na Ndị Kraịst:
46 Ma anyi mere ka ha gbasoo ihe omuma ha (ya bu ndi amuma) Isa nwa Meri, n'enye nkwenye n'ihe di n'aka aka nke Torah. Anyị mekwara ka Injil (ozioma) bịakwute ya. Na ya, nduzi na ìhè dị na ya - na ịnakwere ihe dị n'etiti aka ya nke Torah - na nduzi na ozizi maka ndị nsọ.
47 Ma ndi mmadu nke ndi mmadu (Ndi Kriast) na-ekpe ikpe (nsogbu ha) site na ihe Chineke mere ka ha si na ya (site n'eluigwe) n'ime ya (ya bu na Ozi oma). Na ndị na-adịghị ekpe ikpe site na ihe Allah mere ka ọchịchọ (si n'eluigwe) na ya, ndị ahụ bụ ndị na-adịghị ọcha na-emejọ (Sura al-Ma'ida 5:46-47).
Ndị Kraịst bi na mba ndị Alakụba kwesịrị iji amaokwu abụọ a mara obi, n'ihi na ha nwere ikike ịnọgide na-abụ Ndị Kraịst. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha na-amanye ịghọ Muslim.
Ihe ndabere maka ikike a kachasị mma bụ na Allah zitere Ịsa ka o kwenye na ezi Torah dị ka ọrụ kachasị mkpa (Matiu 5:17-18). Amaokwu a na-egosikwa na na kor'an a na-ewere ozioma ahụ dịka Chineke, okwu sitere na mmụọ nke nwere nduzi na ìhè. Tụkwasị na nke ahụ, anyị na-agụ na Oziọma ahụ nke Kraịst kụziri na-egosikwa na Torah n'onwe ya. Nkwupụta nke abụọ a nke ikwesị ntụkwasị obi nke Torah site n'aka Jizọs na Oziọma Ya bụ nke a ghọtara nke ọma n'oge Muhammad ma ka dị! Ya mere ihe ndị a nke Allah na kor'an kwuru ga-eme ka ndị Alakụba na-ebo Ndị Kraịst ebubo na ha emehiewo ozioma ha.
Muhammad kwere Chineke ka o gosi nduzi na ozizi puru iche nke Kraist nyere ndi naeso ya. Ma eleghị anya, ọ na-echegharị na Ozizi Elu Ugwu (Matiu 5-7), nke Muhammad na-enweghị ike ịgụ, n'ihi na ọ dịghị agbanwegharị ya n'asụsụ Arabic. Na mgbakwunye, Muhammad enweghị akwụkwọ ọgụgụ na mmalite nke ọrụ okpukpe ya (Sura al-A'raf 7:158-159).
Site na ihe ndi a na site na okwu a nke ekwesiri Allah Muhammad weputara ihe ikpe ma kwe ka Allah nye iwu ka onye obula nke nwere ozioma kwesiri idi ndu dika akwukwo a si di. Onye obula obula nke nagagh adi ndu dika ozi oma si ewere onye omekome.
Ndị Kraịst nọ na amaokwu a pụrụ iche a kpọrọ ndị Oziọma ahụ n'ihi na ha na-edekarị ma gwa Muhammad na ndị Alakụba okwu site na Oziọma, ma gbalịa ime ya. Nkọwa nke nsọpụrụ a gosipụtara na Sura a ma si otú a kọwaa Ndị Kraịst dịka "oziọma na-ejegharị".
● N'otu Sura (5:48) Muhammad kwere ka Allah kpugheere ya otu amaokwu pụrụ iche:
48 Anyị zitere gị akwụkwọ (kor'an) nke ziri ezi (Iwu), iji kwado ihe ọ (Muhammad) nwere n'aka akwụkwọ akwụkwọ ahụ, na (ọ bụ Allah) na nche ¬ing n'elu ya. ....
Ndị Alakụba kweere na e nwere akwụkwọ mbụ dị n'eluigwe, nne nke akwụkwọ nile sitere n'aka Chineke, bụ nke onye amụma ọ bụla sụgharịrị ụfọdụ peeji. Na amaokwu a Muhammad ka Allah kwue na kor'an kwadoro Torah na Oziọma n'oge Muhammad, na ya onwe ya, Allah n'onwe ya, na-eche okwu ya na ọ dịghị onye nwere ike ịgha ụgha. Chineke kwesiri ihi ura mgbe ndi Ju na ndi Kristain mehiere akwukwo nso, dika ufodu ndi Alakụba kwuru? Allah na-egosi na onye ọ bụla bụ onye ụgha na-agafe na ntanye a.
● N'elu Sura nke ahu (5:68) Muhammad nekwu ka obu onye "ozioma". O wesoro iwe mgbe ọ hụrụ na ndị Juu na Ndị Kraịst ekweghị ya na ụfọdụ n'ime ha adịghị ebi ndụ dị ka iwu nke akwụkwọ ha si dị:
68 Sịnụ: Unu ndị akwụkwọ, ị bụ ihe efu (ị maghị ihe ọbụla na ị pụghị ime ihe ọma) ruo mgbe i debere Iwu na Oziọma na ihe Onyenwe gị mere ka ọ gbadata gị.
N'amaokwu a, Muhammad gbara ndị Juu na Ndị Kraịst ume ka ha mụọ Torah na Oziọma ahụ ma bie ndụ n'ụzọ dị otú ahụ, ịhazi ma kpee ikpe kpọmkwem dị ka ya. Muhammad n'oge ahụ ka kwenyere na akwụkwọ eluigwe nile sitere na otu ebe ahụ ma gbakwunye otu ihe. } B ghi na echere na Atomaob Ozioma ah ka emehiere; kama nke ahụ, o nyere ndị mmadụ iwu ka ha na-ebi ndụ kwa ụbọchị.
Onye nkwusa ozioma nke Jordan na Jordan jiri amaokwu a, were Bible na aka nri ya ma kpọọ, na-agagharị na ala n'agbata ụgbọ oloko ndị pilgrim jupụtara na Meks n'elu ikpo okwu nke Ma'an, "Ị bụ ihe ọ bụla ruo mgbe ị ga-edozi Torah na Oziọma! "Onye na-ezisa ozi ọma hapụrụ okwu ndị na-akpali akpali na okwu ikpe ikpeazụ ma kpọọ ndị Alakụba nile ịzụta Bible site n'aka ya. Ọ dịghị onye wakporo ya n'ihi na ọ na-emegharị amaokwu Chineke sitere na kor'an!
● Na kor'an, e nwere amaokwu abụọ ọzọ ga-enyere gị aka, ma ha ekwesịghị iji ya mee ihe mgbe niile. Na Sura Yunis 10:94 Allah nyere Muhammad iwu:
94 Mgbe ị na-enwe obi abụọ banyere ihe anyị kpugheere gị, jụọ ndị na-agụ akwụkwọ ahụ (ebe ọ bụ na oge) tupu gị.
Muhammad gbara ụka nke eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ site na ndị Juu na ndị Kraịst, na-ede ozi ha n'echeta ya, gbanwee ha n'asụsụ Arab ọma ma kpugheere ha oge ụfọdụ n'oge n'oge ọ na-ebute ọrịa epileptic. Mgbe uf od u, o kpugheere ihe o n ur u ma o nwegh i ike icheta ihe nd i ah u na okwu ah u na ah ir iokwu nd i ah u. Ọ chọtara ụzọ ọzọ karịa ikwe ka Allah gwa ya ka ọ rịọ ndị gwara ya amaokwu Bible ndị a, ihe nkpughe nke o mepụtara pụtara n'ezie. Olee otu ndi Alakụba ga - esi kwuo na e mepụtara Akwụkwọ Nsọ, ma ọ bụrụ na Allah na kor'an nyere Muhammad iwu ịlaghachikwuru ndị Juu na Ndị Kraịst ka ha kọwaara ya kor'an, n'ihi na ha gụghachiri akwụkwọ ahụ n'ihu ya? Anyị ekwesịghị ịkọwara ndị Alakụba ihe dị n'amaokwu a, ma jụọ ha maka ihe ọ pụtara ruo mgbe ha ghọtara ma kwupụta ihe bụ ezigbo nnwere onwe.
● Na Sura al-Nahl 16:43, a na-atụkwuo ndị Alakụba niile ahịrịokwu ahụ. Allah kwesiri ikwu na Muhammad:
43 Anyị eziteghi n'ihu gị, ma e wezụga ndị ikom anyị kpugheworo. Ya mere (O Muslimlim) jụọ ndị ncheta mgbe ị na-amaghị (ihe ụfọdụ amaokwu dị na kor'an pụtara).
Muhammad gbara ndị Alakụba ume ịgakwuru ndị Juu na ndị Kraịst mgbe ha na-enwe obi abụọ banyere amaokwu Koran, iji jụọ ha banyere Allah na iwu ya. Ma Muhammad ezigaghị ha Onye Kraịst ọ bụla ma ọ bụ onye Juu, ma ọ bụ naanị ndị nwere ike ikwu okwu ederede nke Akwụkwọ Nsọ na Oziọma maka okwu na obi.
Onye ọ bụla nke chọrọ ịrụ ọrụ n'etiti ndị Alakụba dị ka onye na-ejere Onyenwe anyị ozi kwesịrị ịmụta akụkụ dị mkpa nke Akwụkwọ Nsọ n'asụsụ ha site n'obi, gụnyere ọnụ ọgụgụ nke isi na amaokwu. Muhammad n'onwe ya zitere ndị Alakụba naanị ndị nwere ike ịkọghachi okwu Chineke n'enweghị akwukwo n'aka ha.
● E nwere amaokwu ndị ọzọ dị na kor'an nke na-akwado ọdịnaya nke Akwụkwọ Nsọ. Anyi choro ighota nani ihe omuma nke Allah n'ime kor'an:
27 Mgbe ahụ, na nzọụkwụ ha, anyị zipụrụ ndị na-efe anyị, ma zite anyị Ịsa, nwa Mary, anyị mekwara Injị (Oziọma) ahụ ka ọ bịakwute ya, anyị na-etinyekwa obi ndị soro ya n'anya -n'ọma na ebere (Sura al-Hadid 57:27).
Muhammad gbara akaebe ugboro ugboro na Ndị Kraịst bụ ndị enyi nke ndị Alakụba, n'ihi na ha nwere ọmịiko na ebere n'ebe ha nọ. Ahụmahụ nke Muhammad na-alaghachi n'oge mgbe a kpagburu ya n'ụzọ siri ike na Mecca. Ọ gbara ndị Alakụba iri atọ na atọ ume ka ha gbaga Ethiopia ka ha chọọ ebe mgbaba. E nyeghị ha ndị ohu n'ebe ahụ mana ha nwetara enyemaka na nnwere onwe. Muhammad jụrụ onwe ya otú nke a si kwe omume. Ọ chọpụtara na Allah kpaliri Isaa na Gosulu ma meere ebere, ịhụnanya na ọmịiko site n'Oziọma a n'ime obi nke ndị soro Kraịst n'ikwesị ntụkwasị obi.
Muhammad ghọtara ihe dị iche iche na Ndị Kraịst, ma ha apụghị ịghọta ihe kpatara ha ka ha jiri ịhụnanya na-ahụ ndị mmadụ na ndị enyemaka na-enyere ha aka ọbụna ndị iro ha. Azịza ya na Ndị Rom 5:5b, ebe Pọl kwuru, sị: Chineke wụkwasịrị ịhụnanya anyị n'ime obi anyị site na Mmụọ Nsọ, nke e nyere anyị. Muhammad amaghị eziokwu nke Mmụọ Nsọ, ma ọ hụrụ mkpụrụ ya na ụmụazụ Jizọs Kraịst.
Amaokwu a kwuru ụzọ kachasị mma isi kọwaa ndị Alakụba na Akwụkwọ Nsọ adịghị emerụ. Ụzọ kachasị dị irè bụ ihe ọzọ karịa ịhụnanya na ebere ọbụna ndị iro nke obe. Na ndụ anyị, ekpere, ihe àmà na ọrụ anyị nwere ike ịghọ ihe na-eme ka ndị Alakụba mara na Akwụkwọ Nsọ bụ eziokwu na ike. Onye ọ bụla n'ime anyị na-arụ nnukwu ibu ọrụ.
● Peter kwupụtara: Onyenwe anyị, ònye ka anyị ga-aga? I nwere okwu nke ndụ ebighi ebi. Anyị kwenyere ma mara na ị bụ Onye Nsọ nke Chineke (Jọn 6:69; Matiu 16:16). Mgbe nke a gasị, Pita mesiri akaebe a na akwụkwọ ozi mbụ ya: A mụwo gị ọzọ, ọ bụghị nke mkpụrụ a na-emebi emebi, kama nke na-apụghị imerụ ahụ, site n'okwu Chineke nke dị ndụ na nke na - adịgide adịgide (1 Pita 1:23; Jọn 1:13; 3:5).
● James, nwanne Jizọs, gosipụtara ahụmahụ a, na-ede: Ọ họọrọ ime ka anyị mụọ site n'eziokwu nke eziokwu, ka anyị wee bụrụ ụdị mkpụrụ mbụ nke ihe niile o kere eke (James 1:18).
● John, onye ntà nke ndi nēso uzọ-Ya, na-agba akaebe: Ihe ahu nke di site na mbu, nke ayi nuworo, nke ayi huru n'anya ayi, nke ayi lere anya na aka ayi metu - nke ayi nekwusa banyere okwu nke ndu ... Anyị na-ekwusara gị ihe anyị hụrụ ma nụ, ka gị na gị wee nwee mmekọrịta. Na nnweko anyị na Nna ahụ na Ọkpara ya, bụ Jizọs Kraịst (1 Jọn 1:1-3).
● Pul na-ebipu ihe niile a na-ejighị n'aka site n'ikwu, sị: Ekwusaghị m ozioma nke Kraịst, n'ihi na ọ bụ ike nke Chineke maka nzọpụta nke onye ọ bụla nke kwere (Rooma 1:16).
● Onye dere akwụkwọ ozi ahụ nye ndị Hibru na-agwa anyị: Okwu Chineke dị ndụ ma na-arụsi ọrụ ike. Onye na-eri ihe karịa mma agha ihu abụọ ọ bụla, ọ na-abanye ọbụna na-ekewa mkpụrụ obi na mmụọ, nkwonkwo na ụmị; ọ na-ekpe echiche na echiche nke obi (Ndị Hibru 4:12).
Site na puku afọ 2000 nke akụkọ ntolite nke ụka, anyị na-agụ ọtụtụ ihe ọmụma nke ndị nwoke na ndị inyom bụ ndị ghọtara na okwu Jizọs bụ mmụọ na ndụ, jupụtara n'ike, eziokwu na amamihe. Pastọ Wilhelm Busch nke Essen dị na Germany gbara ndị ụka ume na chọọchị ya n'oge ehihie nke bọmbụ ahụ na Agha Ụwa nke Abụọ: "Mgbe ụmụ nwanyị na-akwa ákwá ma na-abanye n'ụlọ nchebe nke elu-igwe, ihe kachasị mkpa abụghị ime ya gi ego ma obu akwukwo-ode akwukwo, ma Baibul‖, n'ihi na obugh nani achicha obugh madu nebu, kama site n'okwu obula nke si naka Chineke puta (Matiu 4:4; Luk 4:4).
Akụ nke otuto na nkpọgharị nke nkpọkọ bụ ozi nke ndị kwere ekwe na Chineke, mgbe Ọ na-agwa ha okwu. Ha na-eto Ya dika Nna ha, kwuputa nmehie ha nye Ya, nata mgbaghara site na Ya na ike nke Mo Nso, nke n'eme ka obi ebere na ihu n'anya ha. Ha na-anụkwa òkù ịkpọbata okwu Chineke dị ndụ nye mba nile, n'ihi na a ghaghị ikwusa Oziọma ahụ n'ihu mmadụ niile tupu Jizọs abịaghachi.
Martin Luther bụrụ abụ, sị:
Onye-nwe-ayi, guzosie ike n'okwu-Gi
,Kwuo ndị na-arụ ọrụ ma ọ bụ mma agha
Ga-ewepu alaeze site n'aka Ọkpara gị
Meekwa ka ihe niile O meworo ghara ịdị irè.
Chọọchị dị na Leipzig bụrụ abụ na 1597:
Okwu-gi bu ezi-okwu,
ọ gēguzosi kwa ike,
Nkwa gị ga-adịgide adịgideNa ndụ,
na mgbe m na-anwụ anwụ.
Gi onwe-gi, Onye-nwem,
nwem:Debe m dịka Gị,Ike niile dị mkpa.
3.08 -- N N O Y C H A
Ezigbo onye na-agụ! Ọ bụrụ na ị mụọ akwụkwọ a nke ọma, ịnwere ike ịza ajụjụ ndị a n'ụzọ dị mfe. Onye ọ bụla zara 90% nke ajụjụ niile n'akwụkwọ nta asatọ nke usoro isiokwu a n'ụzọ ziri ezi, nwere ike ịmepụta akwụkwọ n'aka anyị
Gịnị bụ àgwà nkwụsị nke ọtụtụ ndị Alakụba na-akwado eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ?? Gịnị mere echiche a ji egbochi ọtụtụ n'ime ha ịtụkwasị obi ederede ọ bụla na Torah na Oziọma ahụ?
Olee nsogbu iwu nyere ndị Juu nọ na Medina mgbe ha gbalịrị ịzobe iwu ụfọdụ nke Torah ha n'aka Muhammad, bụ ọkàikpe obodo ha?
Kedu nke ebubo iri na kor'an banyere Torah nke yiri ka ọ kacha dị ize ndụ nye gị?
Ebee ka kor'an na-ekwu na ndị Juu niile nọ n'ụwa kwenyere ịgbanwe ụfọdụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ ha?
N'ebee ka ọ na-ekwu na e mezuru Torah zuru ezu?
Gịnị ka kor'an na-ekwu maka ịgha ụgha nke Oziọma (Injil)?
G in i ka ipuru isi mee ka onye Alakụba doo anya na okwu ahu ekwere "dika Moses" na Deuteronomi 18:15, 18 bu Muhammad?
Gini mere agagh ewere ka nkwa nke Jisos banyere idibia nke Parakletos nebe ka emezuworo n'oge Muhammad?
Gịnị ka ndị ọkà mmụta Muslim ghọtara mgbe ha jiri nlezianya jiri Akwụkwọ Nsọ tụnyere Akwụkwọ Nsọ? Kedu ka ha si gbalịa idozi esemokwu ndị a na-apụghị ịkọwa aghara n'etiti akwụkwọ abụọ a?
Gini bu uzo di iche iche nke Maazi Dedat na ihe mere o nwere ike ime ka okwukwe nke ndi Kristain ajuju na Asia na Afirika kwusi? Gwawa nsogbu a bu nbilite n'onwu Kraist mgbe emesiri ya "onwa ato na abali abali"!
Olee ebe ise ị ga - esi kọwaara ndị Alakụba ihe odide na - adịghị agbanwe agbanwe nke akwụkwọ ọ bụla n'ime Akwụkwọ Nsọ?
Gini ka Onyenwe anyi mere ka Jeremaia mesie Jeremaia ike banyere eziokwu na agbanweghi agbanwe nke okwu Ya?
G in i ka any i kwes ir i im uta site na Deuter on omi 4:2 na Ilu 30:5-6 mgbe any i na-agbachitere eziokwu na nt igh i ike nke Ba ib ul?
Olee amaokwu ndị dị n'Agba Ochie na-egosi na Akwụkwọ Nsọ a n'onwe ya na-agbachitere eziokwu ahụ agbanweghị agbanwe nke mkpughe Chineke n'ime ya?
Olee ot 'u nkwa nke Onye nwe ayi na Aisaia 55:10-11 si eme ka obi di ohu nile kwesiri ntukwasi obi n'etiti ndi Alakụba?
Gịnị mere Onye Kraịst ọ bụla na-emekọ ihe banyere ndị Alakụba ji mụta ihe pụrụ iche Jizọs kwuru na Matiu 5:17-18?
Olee ot'odi Jisos si kwenye na okwu nke aka ya bu ebigh ebi?
Gini ka anyi puru imata banyere eziokwu nke ozioma ah site ná mmalite nke onyeo gini ah nke Grik, Luk, rue ozio ma ya?
Gini ka oputara nye ndi Alakụba na akpọrọ Jizos dika "Okwu nke Chineke" n'anu aru na ozioma nke John na kor'an?
Gini mere Mmo nke Eziokwu ji di mkpà nye anyi na ndi Alaloz? Gịnị mere na Mmụọ nke Eziokwu adịghị adị na Islam? Kedu ihe bụ eziokwu nke eziokwu a maka ọrụ gị n'etiti ndị Alakụba?
N'ihi gini ka Jisos ji n'ekpere Ya kwuputara Nna Ya nke elu-igwe: "Okwu gi bu eziokwu"? G in i ka nkwenye a doro anya p utara?
Gịnị mere Mkpughe 22:18-19 ji mee ka ndị Alakụba na-emeghe ihe niile kọwaa?
Olee ajụjụ nwere ike ịjụ, "Ònye gbanwere Torah?" enyere gị aka igosi ndị Alakụba na ọ dịghị onye nwere ike ịghahie Akwụkwọ Nsọ n'ụzọ a na-enweghị atụ?
Olee otú ajụjụ a nwere ike isi kwuo ya, "olee mgbe ị chere na gbanwere Torah?" enyere gi aka iduzi ndi Alakụba na nrughari nke Torah?
N'ihi gịnị ka ihe odide oge ochie nke narị afọ 1500 nke akụkụ dị iche iche nke Akwụkwọ Nsọ ejighị kwekọọ ma ọ bụ ọbụna bibie? Gini mere ihe nile sitere na kor'an ji gbaa?
Olee ihe ndị ị ga-enweta site na akwụkwọ mpịakọta Aịsaịa nke a chọpụtara na Qumran?
Gịnị bụ ikike pụrụ iche nke ndị Juu bi na islam esiteghi na ala dị ka Sura al-Ma'ida 5:43-45? Kedu ka Muhammed si gosiputa n'ike mmụọ nsọ na enweghị ike nke Torah na amaokwu ndị a?
Olee otu amaokwu ndị pụrụ iche dị na Sura al-Ma'ida 5:46-47 na-eme ka Ndị Kraịst nile nwee ikike ịnọgide na-abụ ndị Kraịst ma ọ bụrụ na ha bi na islam islam? Ntak emi kpukpru Onye Kraịst emi ẹdụn̄de ke otu mbon Muslim ẹkpep mme ufan̄ikọ emi ẹnyụn̄ ẹfiọk mmọ? Kọwaa ihe di n'amaokwu abua a nke kor'an!
Olee otú Muhammad siri kwuo na kor'an ya na-akwado Agba Ochie na Agba Ọhụụ? Kedu ka e si echebe Allah na Islam iji kpuchie mkpughe ya? (lee Sura al-Ma'ida 5:48)
G in i mere Muhammad ji b ur u onye nkwusa ozioma nke sitere n'aka nd i Juu na nd i Kra ist ibi nd u kwek or o ha? Kedu ihe ịkpọ oku pụtara maka enweghị ike nke Akwụkwọ Nsọ? (lee Sura al-Ma'ida 5:68)
Ònye ka Muhammad ga-ajụ banyere ihe nke Koran ya mgbe ọ na-aghọtaghi ihe e kpughere site n'aka ya? (lee Sura Yunus 10:94)
Ole ndị ka ndị Alakụba na-eduzi mgbe ọ bụla ha chọrọ enyemaka iji ghọta kor'an ha? (lee Sura al-Nahl 16:43)
Gini bu ihe kachasi igbaàmà nke enweghi ike na ike nke Baibul? (lee Sura al-Hadid 57:27)
Eweokwu nke sitere n'ihe àmà nke ndịozi Kraịst gosipụtara n'ụzọ doro anya na Bible bụ Okwu Chineke na-agbanweghị agbanwe?
Gịnị mere Pọl onyeozi ji kwuo na Oziọma Kraịst nwere ike zuru oke nke Chineke? (lee Ndị Rom 1:16)
Ndi Onyenwe anyi di ndu agwa gi okwu site na okwu Ya edere n'akwukwo nso? Ọ bụrụ na ọ dịịrị gị mfe, biko dee anyị na mkpirikpi ihe Ọ gwara gị.
A na - enye onye ọ bụla nọ na ajụjụ a ohere iji akwụkwọ ọbụla dị ya mma na ịjụ onye ọ bụla a pụrụ ịtụkwasị obi mara ya mgbe ọ na - aza ajụjụ ndị a. Anyị na-echere azịza gị ndị e dere ede tinyere adreesị zuru ezu gị na akwụkwọ ma ọ bụ na e-mail gị. Anyị na-ekpe ekpere maka gị na Jizọs, Onyenwe anyị dị ndụ, na Ọ ga-akpọ, kọwaa, zipụ, duzie, wusie ike, chebe ma binyere gị kwa ụbọchị nke ndụ gị!